လီဗာပူးလ်ရဲ့ လိုအပ်နေတဲ့ ကွက်လပ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးမယ့်သူ နာဘီကီတာ
လီဗာပူးလ်ရဲ့ လိုအပ်နေတဲ့ ကွက်လပ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးမယ့်သူ နာဘီကီတာ Naby Keita
13 Aug 2018 . 5:29 PM
နာဘီကီတာ Naby Keita ကို လီဗာပူးလ် ဘာလို့ အသည်းအသန် ခေါ်ယူချင်ခဲ့ရတာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့ အဖြေကို ၀က်စ်ဟမ်းနဲ့ပွဲမှာ ရှာတွေ့လိုက်ရပြီ။ နာဘီကီတာဟာ လီဗာပူးလ်နည်းပြ ယာဂန်ကလော့ပ် Jurgen Klopp ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာအတွက် အဖြေဖြစ်နေလို့ပဲ။ ၀က်စ်ဟမ်းကို (၄)ဂိုးပြတ် အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာ နာဘီကီတာရဲ့ ခြေစွမ်းကို ပရိသတ်တွေ ကြည့်လိုက်ရမှာပေါ့။ သူ့ရဲ့ Movement ၊ Vision ၊ Pace တွေက ၀က်စ်ဟမ်းခံစစ်ကို တစစီဖြိုခွဲခဲ့ပြီး အဖွင့်ဂိုးက သူ ပါဝင်ပတ်သက်မှုကြောင့် ရခဲ့တာပါ။
လီဗာပူးလ်အသင်းမှာ အရင်ကတည်းက လိုအပ်တာက ကွင်းလယ်နဲ့ တိုက်စစ်ကို ချိတ်ဆက်ပေးမယ့် ကစားသမားပဲ။ ဆာလာ Salah ၊ ဖေမီနို Firmino ၊ မာနေး Mane တို့လို Finishing Skill ကောင်းတဲ့ ကစားသမားတွေအတွက် ပံ့ပိုးမှု လုပ်နိုင်မယ့်ကစားသမားမျိုး၊ သူတို့(၃)ဦးရဲ့ တိုးအား၊ ရုန်းအားတွေကြောင့် လွတ်ထွက်လာတဲ့ Space တွေကို ကောင်းကောင်း အသုံးချနိုင်မယ့် ကစားသမားမျိုး လိုအပ်ခဲ့တာပါ။ ချိန်ဘာလိန် Chamberlain က အဲဒီနေရာကို ၀င်ကစားနိုင်တဲ့ကစားသမားမျိုးဖြစ်ပြီး အခု နာဘီကီတာ ရောက်လာတာကြောင့် ပိုကောင်းဖို့ပဲရှိတော့တယ်။
နာဘီကီတာက ယာဂန်ကလော့ပ် လိုချင်တဲ့ ပြိုင်ဘက်ကို Press လုပ်ဖို့၊ ဘောလုံးဆုံးရှုံးသွားရင်လည်း အမြန်ဆုံး ပြန် Cover လုပ်မယ့် ကစားသမားမျိုးပဲ။ အခုအချိန်မှာ နာဘီကီတာရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင်(၅၂.၅)သန်းက ထိုက်တန်မှုရှိလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မေးစရာမလိုလောက်တော့ဘူးလို့ ထင်တယ်။ လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ ဂန္ထ၀င်နံပါတ်(၈)ပိုင်ရှင်သစ် နာဘီကီတာဟာ လီဗာပူးလ်အသင်း လိုအပ်နေတဲ့ ကွက်လပ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးမယ့် Piece Of Puzzle ဆိုတာ အသေအချာပဲဖြစ်ပါတော့တယ် . . .
လီဗာပူးလျရဲ့ လိုအပျနတေဲ့ ကှကျလပျကို ဖွညျ့ဆညျးပေးမယျ့သူ နာဘီကီတာ Naby Keita
နာဘီကီတာ Naby Keita ကို လီဗာပူးလျ ဘာလို့ အသညျးအသနျ ချေါယူခငျြခဲ့ရတာလဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးရဲ့ အဖွကေို ဝကျဈဟမျးနဲ့ပှဲမှာ ရှာတှလေို့ကျရပွီ။ နာဘီကီတာဟာ လီဗာပူးလျနညျးပွ ယာဂနျကလော့ပျ Jurgen Klopp ရငျဆိုငျနရေတဲ့ ပွဿနာအတှကျ အဖွဖွေဈနလေို့ပဲ။ ဝကျဈဟမျးကို (၄)ဂိုးပွတျ အနိုငျရခဲ့တဲ့ပှဲမှာ နာဘီကီတာရဲ့ ခွစှေမျးကို ပရိသတျတှေ ကွညျ့လိုကျရမှာပေါ့။ သူ့ရဲ့ Movement ၊ Vision ၊ Pace တှကေ ဝကျဈဟမျးခံစဈကို တစစီဖွိုခှဲခဲ့ပွီး အဖှငျ့ဂိုးက သူ ပါဝငျပတျသကျမှုကွောငျ့ ရခဲ့တာပါ။
လီဗာပူးလျအသငျးမှာ အရငျကတညျးက လိုအပျတာက ကှငျးလယျနဲ့ တိုကျစဈကို ခြိတျဆကျပေးမယျ့ ကစားသမားပဲ။ ဆာလာ Salah ၊ ဖမေီနို Firmino ၊ မာနေး Mane တို့လို Finishing Skill ကောငျးတဲ့ ကစားသမားတှအေတှကျ ပံ့ပိုးမှု လုပျနိုငျမယျ့ကစားသမားမြိုး၊ သူတို့(၃)ဦးရဲ့ တိုးအား၊ ရုနျးအားတှကွေောငျ့ လှတျထှကျလာတဲ့ Space တှကေို ကောငျးကောငျး အသုံးခနြိုငျမယျ့ ကစားသမားမြိုး လိုအပျခဲ့တာပါ။ ခြိနျဘာလိနျ Chamberlain က အဲဒီနရောကို ဝငျကစားနိုငျတဲ့ကစားသမားမြိုးဖွဈပွီး အခု နာဘီကီတာ ရောကျလာတာကွောငျ့ ပိုကောငျးဖို့ပဲရှိတော့တယျ။
နာဘီကီတာက ယာဂနျကလော့ပျ လိုခငျြတဲ့ ပွိုငျဘကျကို Press လုပျဖို့၊ ဘောလုံးဆုံးရှုံးသှားရငျလညျး အမွနျဆုံး ပွနျ Cover လုပျမယျ့ ကစားသမားမြိုးပဲ။ အခုအခြိနျမှာ နာဘီကီတာရဲ့ပွောငျးရှကွေ့ေး ပေါငျ(၅၂.၅)သနျးက ထိုကျတနျမှုရှိလားဆိုတဲ့ မေးခှနျးကို မေးစရာမလိုလောကျတော့ဘူးလို့ ထငျတယျ။ လီဗာပူးလျအသငျးရဲ့ ဂန်ထဝငျနံပါတျ(၈)ပိုငျရှငျသဈ နာဘီကီတာဟာ လီဗာပူးလျအသငျး လိုအပျနတေဲ့ ကှကျလပျကို ဖွညျ့ဆညျးပေးမယျ့ Piece Of Puzzle ဆိုတာ အသအေခြာပဲဖွဈပါတော့တယျ . . .